Home News Wasiir Sabriye oo ka hor yimid ceyrinta qaar ka mida Gudomiyayaasha Degmooyinka...
Wasiir Sabriye oo ka hor yimid ceyrinta qaar ka mida Gudomiyayaasha Degmooyinka G. Banadir
Duqa magaalada Muqadishu Eng Abdiraxman Yarisow ayaa waxaa u go’aansaday in uu shaqo fariisin ku sameeyo qaar ka mida Gudoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Bandir. Wasiirka Arimaha Gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa ka hor yimid tilaabada uu damcay in uu qaado Duqa Magaalada Muqadishu. Wasiirka ayaa codsaday in warqadda shaqo ka fariisinta ay la socoto qoraal cadaynaya dambiga lagu soo oogay iyo sababaha shaqada looga ceytrinayo gudoomiyayaasha.
Talaabadan uu qaaday Wasiir Sabriye ayaa ah mid sharciga ku tagaan isla markaana muujinayso in aan si qalad ah qof shaqo looga qaadi karin. Talaabada wasiirka qaaday ayaa cashar u tahay dowladda inteeda kale.
Previous articleWasiirka Caafimaadka oo ay suuragal tahay in Xilka laga Qaado (Sababtu Maxeey Tahay)
Next articleMw-Farmaajo oo Sanad iyo Bar ka dib kusoo Baraarugay Qiyaanada Rw-Kheeyre Iyo Go’aan Culus oo uu ka qaatay!!
Ciidanka Xasilinta oo ku fashilmay Amniga Muqdisho Iyo Shacabka Oo Weji...
Roobab Khaasara gaystay oo ka da,ay Gobolka Togdheer